iClock - I-Mojave yokuqala, iMac OS 10.14 Iyahambelana, ukuphuculwa kwemveliso, App ikhutshwe | Plum emangalisayo
UMHLA: 6 / 6 / 18
ISan Francisco, CA-iClock, sisixhobo sokuqala ukunika ingxelo yokuhambelana neMac OS Mojave elandelayo. I-Apple Mojave iya kukhutshwa ekwindla kodwa iClock iyafumaneka ngoku. Nabani na onokuyikhuphela kwangoko ukuze abone ukuba iluncedo kangakanani.
Isuphavayiza yesuphavayiza "Ezine ezigqibeleleyo: Ukunyuka kweSilver Surfer", "Star Wars: Isiqendu I - Isisongelo sePhantom", "Ilizwe elilahlekileyo: iJurassic Park" kunye nezinye iimovie ezininzi.
I-Plum Amazing CEO uJulian Miller uthe "iClock ngoku yenye yezona zinto zindala kunye nezona zintsha kwi-Mac. Ikwayenye yezonaapps zithandwayo neziluncedo. Iphinde yabhalwa ngokutsha kwaye yahlaziywa kwifowuni yeMojave Mac OS 10.14. IClock ithatha indawo yewotshi ye-Apple endala ebonisa ixesha / umhla. IClock ibonelela ngexesha, umhla, isigaba senyanga, inkxaso yeApple kunye nekhalenda kaGoogle / iminyhadala, ii-alamu, ii-chimes ezinezandi ze-chime, ucwangciso lweentlanganiso zehlabathi, Thatha i-5 (ixesha elikhethekileyo le-pomodoro lokuthatha ikhefu), iwotshi yehlabathi, iwotshi edadayo, usetyenziso imenyu, yeka ukubukela, ukubala ukubala kunye neekhalenda zobuqu ezishicilelweyo ezineefoto, zonke ziyafumaneka kwangoko kwimenyu yokubonisa. Eyona nto ilunge ngakumbi, eyonwabisayo kwaye eluncedo rhoqo ngaphambili.
Kwi-Mac iClock yandisa imveliso ngokuba neenkqubo ezininzi ezihambelana nexesha lokusebenza zonke ziyafumaneka ngokuchofoza kwiwotshi okanye kwikhalenda kwi-menubar. Ilungile kubaphathi babantu okanye iimveliso. Ilungile kuye nabani na obandakanyeka kwimidiya yoluntu. Ilungile kwiingcali, abafundi kunye nabani na omsebenzi wakhe uxhomekeke kwixesha.
Ibonisiwe kwimenyu yemenyu
ixesha-Bonisa ixesha kwimenyu kodwa kuseto lokutshintsha ifonti, ubungakanani, umbala, ifomathi *, njl.
* Ifomathi ivumela ukuseta ngokutsala kunye nokulahla inani elingenasiphelo lezinto eziguquguqukayo ukubonisa ixesha kunye nomhla kanye ngendlela othanda ngayo.
Ukucofa ixesha kwimenyu kubonisa iMenyu yeXesha leMenyu
Ixesha leHlabathi -Umpompo olukhawulezayo kwiXesha kwimenyu lubonisa imenyu ngayo yonke idolophu okanye ixesha lendawo ofuna ukubonisa ixesha lendawo.
IP yangaphandle nangaphandle - yongeza ukuba ufuna ukubona nokukopa idilesi ye-IP.
Alarms Amanani angenasiphelo eialamu onokuzenza ngempompo kwaye akuvuse kwimenyu
Thatha i5 - igama elithatyathwe kwisiqwenga sejazz ngu
IiClocks eziLadayo -Iluncedo kubantu abanjengabarhwebi okanye abarhwebi abafuna ukwazi rhoqo ixesha kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
Makubukele - kanye kanye oko kuvakala ngathi
Bala Phantsi -Window enokubonisa ukubala ukubala ukuya kwiKrisimesi, uNyaka oMtsha, isikhumbuzo sakho okanye nantoni na.
Umcwangcisi weHlabathi -Ukuba unentlanganiso yesizwe okanye yamanye amazwe ukulungelelanisa ixesha sisixhobo esifanelekileyo
umhla -Umhla wokubonisa kwi-menubar kodwa ngoseto lokutshintsha ifonti, ubungakanani, umbala, ifomathi *, njl.
Ukucofa uMhla wokuBonisa iMenubar enye yezi Khalenda ezimbini
Ikhalenda emncinci -Inokubonisa i-1, 2, iinyanga ezi-3 ngexesha. Le khalenda isebenza ngokudibeneyo neApple okanye iiKhalenda zikaGoogle kwaye inokubonisa iminyhadala yonke ekhoyo ngempompo kwimenyu.
Ikhalenda enkulu -Inokubonisa i-1, 6, iinyanga ezili-12 ngexesha, kunye nefoto onokuyiprinta inyanga enye okanye ikhalenda yonyaka njengesipho okanye eludongeni lwakho.
"Le yinkqubo entle kakhulu." -U-Leo Laporte kwi-MacBreak 261, i-CEO yeTwit.tv kunye nePodcaster
“Elona xesha libalaseleyo ndakhe ndanalo !!!!” -Charles Henry, PanTech, Inc.
Kunzima ukucinga ukuba umsebenzi omninzi kangaka unokupakishwa 'kwewotshi'! ” -Guy Kawasaki, Umbhali, iBhlogger, uMvangeli, kunye noShishino.
“Ndiyayithanda i-app iClock. Onke amanqaku owathandayo kwaye akukho nanye ongayithandiyo ”-Andy Ihnatko, Intatheli, umbhali, iMacBreak Weekly.
-Anil K Solanki
Into enditsalele kuyo kwi-iClock yimenyu yexesha lendawo. Njengoko uyazi ukuba ukuthengiswa kwesoftware kubanzi kwihlabathi liphela ngenxa ye-Intanethi. Xa ndifuna ukwenza umnxeba wenkonzo phesheya kufuneka ndazi ukuba ngubani ixesha kweli lizwe. Ndisebenzise ezinye iimveliso ezifuna ukuqhuba inkqubo ukubona amaxesha, okanye isoftware edibanisa idesktop ngeewotshi. IClock ilula, ayiyiyo-obtrusive kunye FAST. Enkosi ngenkqubo eluncedo kodwa elula ukuyisebenzisa. ” -UDavid Parrish
IPlum Isoftware namhlanje ibhengeze u-4.3.5 we-iClock ye-Mac. IClock sisicelo sokuqala esenziwe ngo-1998 saphinda saphinda saphinda saphinda saphinda saphinda saphinda saphinda sabhalwa kwakhona amaxesha amaninzi ukusukela ngoko. Inguqulelo yamva nje iya ngaphaya kwaye ithathe indawo yeApple Clock endala ebonisa kuphela ixesha / umhla. iClock iphucula imveliso kunye nokubulawa kwexesha okunxulumene nee -apps zonke ezifumaneka kwi-menubar kunye nokufikelela kwitephu okanye ezimbini. IClock ibonelela ngexesha, umhla, isigaba senyanga, inkxaso ye-Apple kunye nekhalenda yeGoogle / imicimbi, iialamu, ii-chimes ezinezandi ezibandakanyiweyo, ucwangciso lwehlabathi lweentlanganiso, ixesha lomdlalo we-pomodoro, iwotshi yehlabathi, iiwotshi ezihambahamba, imenyu yenkqubo, ukumisa ukubukela, ukubala nokubalwa ngokwezifiso Iikhalenda zakho ezishicilelweyo zineefoto ezifumanekayo ngempompo kwimenyu. Yandisa imveliso yakho ngeClock.
IPlum emangalisayo, iLlc yinkampani eyimfihlo ebekelwe ukwenza iMac, iiWindows, iiapps ze-iOS kunye ne-Android. I-Plum Amazing ngumboneleli wehlabathi kwizicelo zeselfowuni kunye nedesktop ukusukela ngo-1995. IPlum Amazing yenza kwaye ithengise isoftware ngeyayo, iwebhusayithi kaGoogle kunye neApple kodwa ikwenza nomsebenzi wophuhliso (wenkqubo) wezinye iinkampani kunye nabaxhasi ngakumbi kwindawo yokufota. Sinomdla wokwenza iimveliso ezinkulu ezinjengeCopyPaste, iWatermark, yKey, iClock, iTinyAlarm, iTinyCal, iPixelStick, iSpeechMaker nezinye. Ilungelo lokushicilela (C) 2018 Plum emangalisayo. Onke Amalungelo Agciniwe.